संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको अभिव्यक्ति भिडियोमा, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्था नै राखेनौँ’
तस्बिर सौजन्य : संसदीय मामिला पत्रकार समाज
२०७७ पौष २३ बिहीबार ०२:२८:००
नेम्वाङको अभिव्यक्ति जसले सर्वोच्च न्यायालयलाई पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ
संसद् सचिवालयसमेतको आयोजनामा ३ र ४ साउन ०७६ मा धुलिखेलमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रमको भिडियो संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अफिसियल ह्यान्डिलबाट ट्विट भएको भेटिएको छ, जसमा नेम्वाङले भनेका छन्, ‘यो संविधानअनुसार १५–२० दिन यताउता हुन सक्ला, तर ठ्याक्कै पाँच वर्षमा मात्र चुनाव हुन्छ ।’
दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले विरोध गरिरहेको छ । यही वेला संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भिडियो चर्चामा आएको छ, जसमा उनले यो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
कतिपय विश्लेषक र कानुनविद्ले अदालतलाई केही शंका भए संविधान निर्मातालाई बोलाएर अन्तर्वस्तुबारे राय लिन सक्ने बताएकै वेला संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङको अर्थपूर्ण धारणा सार्वजनिक भएको छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशले संविधान निर्माताको राय के थियो भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्छ । ६ सय एकमध्ये केही हुनुहुन्न होला, अरू त हुनुहुन्छ नि ! आज दुई सय वर्ष बितिसक्दा पनि अमेरिकी संविधानको व्याख्या हुँदा ‘फाउन्डिङ फादर’ले के भन्थे भनेर छलफल हुन्छ । जब कि ती मान्छे कोही पनि उपस्थित छैनन् । आज ६ सय एकमा दुई–चारजना हुनुहुन्न होला, सबै मौजुदा रहेको अवस्थामा अदालतले सोच्नै नपर्ने अवस्था छ ।’
नेम्वाङ ओलीनिकट नेता हुन् । संसद् विघटनबारे नेम्वाङले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा केही प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूले यसबारे अहिले केही नबोल्ने नेम्वाङको भनाइ छ । संविधानसभाको अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले संसद् विघटनको विषयमा सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले समेत संसद् विघटन संविधानमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएकाले ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद् विघटन गरेको बताएका छन् ।
संविधानका मस्यौदाकार भन्छन्–
प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, लामो बहसपछि संविधानमा यस्तो सहमति भएको थियो
प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैजसो राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्, नागरिक अगुवा र मिडियाले एकस्वरले बुलन्द विरोध गरेका छन् । जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार बनाउन एकपछि अर्को विकल्प खोज्ने भनेर संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट लेखिएको छ । यस्तो व्यवस्था किन राखिएको थियो ? नयाँ पत्रिकाले संविधान निर्माताहरूको अनुभव संकलन गरेको छ । उनीहरूको भनाइ यस्तो छ :
लक्ष्मणलाल कर्ण : लामो छलफलपछि संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिने सहमति गरेका हौँ
‘मिक्स्ड सिस्टम’मा संसद् त हुने नै भयो, तर कस्तो भूमिकामा, कस्तो हैसियतमा ? त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा ग¥यौँ । खासगरी विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन भयो, त्यसले सरकार पाँच वर्ष चलेन, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद् भंग गर्दा जनमतको पनि अनादर भयो । त्यसकारण हामी अब अर्काे बाटो हिँडौँ भन्ने विषयमा छलफल भयो । फेरि अन्य देशमा पनि अहिले ‘हाइब्रिड पार्लियामेन्ट’ वा सुधारिएको संसद् भनिन्छ, त्यसको अभ्यास छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई : विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर सरकार गठनका चारवटा व्यवस्था राखिएको हो
हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । पहिलो संविधानसभामा त शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेतर्फ लगभग बहुमत पनि बन्यो । बहुमत भन्नाले एमाले र प्रदीप गिरि, गगन थापालगायतका नेताहरू मिल्दा कम्तीमा एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)मा जाने सम्भावना बढेको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यो सम्भावना बिथोलियो । एमाले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछि हट्यो ।
विमलेन्द्र निधि : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेर अहिले संविधानमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने सहमति भएको थियो
खिमलाल देवकोटा : सुधारिएको संसदीय प्रणालीको चारवटा मुख्य विशेषता हुन, त्यसमध्ये संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने पुरानो व्यवस्था हटाइयो
पहिला यो विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा थियो । समितिमा दुईथरी मत थिए । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री), अर्काे संसदीय प्रणाली । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । उनीहरू त्यही एजेन्डा लिएर चुनावमा गएका थिए ।
संवैधानिक समितिमा शीर्ष नेताहरूको एउटा कमिटी बन्यो, प्रचण्डको अध्यक्षतामा । त्यो कमिटीले पुनः अर्काे कार्यदल बनायो, शीर्ष नेताहरूलाई सहयोग गर्न । त्यो कार्यदलमा लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा अग्नि खरेल, राधेश्याम अधिकारीलगायत हामी त्यहाँ बस्यौँ । पहिलोपटक छलफलमा हामी फ्रेन्च मोडेलमा जाऊँ भन्ने भो । त्योचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दुईवटाको पावर सेयरिङ गर्ने । त्यो मान्य नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, अर्काे संसदीय प्रणाली भन्नेमा अडान आयो । धेरै छलफल भयो, सम्झौतामा जानुपर्ने भयो । त्यो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेहरू पनि एक ‘स्टेप’ तल झर्ने, संसदीय प्रणाली भन्नेहरू एक ‘स्टेप’ माथि जाने भन्ने भयो, त्यसैमा सहमति भयो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन हुँदैन ? पाँच वर्षसम्म कसैले छुन नसक्ने भयो भने तानाशाही हुन सक्छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली किन हुँदैन भन्दा त्यसले अस्थिरता बढाउन सक्छ । किनकि विगतमा संसदीय प्रणालीले अस्थिरता सिर्जना ग¥योे, संसद् विघटन भयो, भ्रष्टाचार, दुराचारलगायत बेथिति भए, त्यसले गर्दा देशको विकास भएन भन्ने भयो । त्यसकारण अस्थिरता रोक्ने उपाय के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । बेथिति हटाउन संविधानमै सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस सहमत भयो । खासमा कांग्रेस सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जान तयार भयो । त्यसैमा सहमति भएको हो ।
सुधारिएको संसदीय प्रणालीको चारवटा मुख्य विशेषता भए । एउटा, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने व्यवस्था हटाइयो । सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प अभ्यास नभएसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । यसमा कस्तो भयो भने पहिला बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन्छ । त्यो भएन भने दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार चल्छ । त्यसले विश्वासको मत लिन्छ । त्यो पनि भएन भने ‘लार्जेस्ट पार्टी’को अल्पमतको सरकार बन्छ, त्यसले विश्वासको मत लिन्छ । त्यो पनि भएन भने संसद्को एकजना मात्रै सदस्यले पनि म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दावा ग¥यो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाइन्छ । उसले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन सक्यो भने उसको सरकार रहन्छ, सकेन भने निष्कर्षमा पुगिन्छ– संसद्ले सरकार दिन सकेन ।
सरकार दिन नसक्ने संसद् भएपछि बल्ल त्यो संसद्ले अर्काे संसद्को खोजी गर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । दोस्रो, संसद् विघटनको कारणले विगतमा देश जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाविहीन भयो, त्यो रिक्तताले लोकतन्त्र नै गुम्यो । त्यसकारण निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था कुनै पनि हालतमा रिक्त राखिनुहुँदैन भन्ने अर्काे निष्कर्ष । त्यसैले पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएकोे हो ।